Amathiphu we-Semalt Wokugijima Ibhulogi Ngokuphumelelayo
Kunoma yiluphi uhlelo lwe-e-commerce, ukugcina ukuxhumana okuqhubekayo nekhasimende lakhoiyinto ebalulekile ekusebenzeni komsebenzi. Amabhulogi aqala ukuxhumana okuqinile namakhasimende akho. Ngakho, ukungeza ibhulogi kwiwebsite yethu kungenye yeziningiamasu we-SEO asebenzayo.
Uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi weDividal, uFrank Abagnale uchaza izici ezibalulekile zokusebenzisa ibhulogi njengethuluzi lokukhulisa ukuxhumana namakhasimende.
Kunoma yiliphi isayithi le-intanethi, ukungeza ibhulogi kusho ukuthi kunesiteji lapho kukhona khonaangabelana ngokuthunyelwe kanye nokuqukethwe okusha okufanele. Kuzinhlelo eziningi zokuphathwa kokuqukethwe okuzenzakalelayo, ngokuvamile kuyingxenye ethi "ibhulogi" kuso - شركات تنظيف منازل بالدوادمى.Kwabanye abathuthukisi, ukukopisha ibhulogi kungaba umsebenzi olula, ngenxa yezifanekiso eziningi zamahhala kanye nokuhlaselwa kwe-CSS. Umehluko ukhonauhlelo lokuphathwa kokuqukethwe olusebenzisa ibhulogi. Kubantu abaningi, ukungeza ibhulogi kuzofaka ngokuqondile ukuchofoza kwenkinobho.Imibono yokubhuloga evamile ye-niche yakho ingafaka:
Into ehlobene ne-website yakho
Isevisi ekhethekile, umnyango noma umsebenzi
Ungakhathazeki kakhulu mayelana nezindaba zobuchwepheshe kubhulogi yakho.
Umuntu angaba nayo yonke imibuzo lapho efaka ibhulogi kuwebhusayithi. Ngokubaisibonelo, omunye angase azibuze i-ROI, izindleko zokugcinwa, okuqukethwe okuthunyelwe, ukufaka ibhulogi kuwebhusayithi, ukuqasha ama-freelancers nabathuthukisinezici zokuzenzakalela zebhulogi. Lokhu kubalulekile, kepha akufanele kuthathe isikhathi sakho esiningi.
Umqondo wokwenza ibhulogi akubandakanyi eziningi zobuchwepheshe ekuqaleni kwesigaba.Inhloso yanoma iyiphi ibhulogi ukudala indlela enhle nephumelelayo yokuxhumana namakhasimende akho. Ibhulogi imoto yokwenza lokhu kukhulumisanakwenzeke, hhayi ubuchwepheshe bokubeka iwebhusayithi enhle..
Faka phakathi ukukhushulwa
Ungakwazi ukubeka ukukhushulwa kubhulogi. Ngokwesibonelo, ake sithi usuku lwabesifazane balo, naweube nesayithi le-fashion online. Kulo bhulogi, ungafaka isipho ezifana ne-freebie. Ngokwesibonelo, ungasho ukuthi "Thatha owesifazane wakho nawe,futhi uzothola isivuno esikhulu samahhala ". Kunezinye izindlela eziningi ongayisebenzisa ukuxhumana namakhasimende akho ekukhuthazeni. Ngokwesibonelo:
1. Shicilela ekuthunyelwe kwebhulogi. Ungasebenzisa okuthunyelwe kwebhulogi ukuchaza izici ezihlukeneendabeni yakho. Lokhu okuthunyelwe kuzothunyelwa ku-permalink.
2. Yabelana nge-URL emithonjeni yezenhlalo. Sebenzisa imithombo yezokuxhumana yeziteshi zendawo ukuze ushicileleokuthunyelwe. Ungasebenzisa izikhangiso ezihlosiwe ezikhomba idolobha lakho. Amawebhusayithi wezokuxhumana wezenhlalo njenge-LinkedIn ne-Twitter angaba indawo enhle ukuqalaqala ukuhlanganyela.
3. Thumela i-imeyili. Khumbuza ababhalisile bakho mayelana nokukhuthazwa. Khumbula ukuhlinzekaukuxhumanisa kokuthunyelwe kanye nesifinyeto sokuqukethwe.
4. Setha umkhankaso we-Google AdWords. Ungasebenzisa amagama angukhiye aqondisa okuthileinto endaweni yakho. Lungiselela okuqukethwe kanye nomgwaqo uzogeleza.
Noma ubani angaqala ukubhuloga noma kunini. Amabhizinisi asungulwe asethele ama-multipleamabhulogi asebenzelana nezici ezihlukahlukene ku-niche yawo. Amawebhusayithi amaningi angazuza ekusebenziseni ibhulogi ngisho nasendleleni yokuzenzekelayo. I-blog ingakwaziyiba indlela enhle yokugcina uxhumana njalo namakhasimende akho. Ihlanganisa izici ezahlukene ezifana namazwana kanye namaforamu, ifomuisisekelo sobuhlobo obuhle bamakhasimende.